Mụaka na akụrụngwa | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
N'okpuru ebe a bụ ndị na - eweta Ọkachamara Ndị Mkpa Pụrụ Iche na Ngwá Egwuregwu Pụrụ iche nke anyị chere nwere ike ịmasị ma ọ bụ baara gị uru. Ọ bụ ezie na anyị na-agbasi mbọ ike iji hụ na njikọ ndị a ziri ezi, ruo ụbọchị ma dị mkpa, Olọ Akwụkwọ Oakleigh enweghị ike ibu ọrụ maka ibe ndị na-eweta mpụga.
Akwa maka ụmụaka Nrọ Nrọ abụrụla onye na-ebubata ihe ndina buru ibu UK kemgbe 2012 na n'oge ahụ anyị kesara 10,000 akwa ọnụ. N'afọ gara aga naanị Buttle UK enyela 2,500 Nrọ nrọ maka ụfọdụ n'ime ụmụaka kachasị ike na UK.
Site n'enyemaka site na Nrọ Nrọ na Akwụkwọ akụkọ Anyanwụ, Buttle UK's Chances for Children na-ezube ịbugharị ihe ndina 3000 nye ụmụaka nwere nsogbu ego na UK.
Carrie-Lou Mee ọtụtụ ihe maka ndị na-eto eto na ndị toro eto nwere mkpa ndị ọzọ, nke a gụnyere bandannas na-enweghị mmiri, nri pad, nri mmata na oche oche mkpuchi yana ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ebe na-agbanwe agbanwe (ma ọ bụ ekwentị 020 7696 6019) bụ otu na-eme mkpọsa maka ụlọ mposi ọha na eze nwere oche ndị okenye na-agbanwe agbanwe, ndị ndozi na ụlọ ọrụ nkwarụ ndị ọzọ. Ebe nrụọrụ weebụ ha nwere a map na-egosi ihe karịrị akụrụngwa 200 gburugburu UK.
Computers maka nkwarụ weta Internet dị njikere Multimedia PC iji akụkụ ọhụụ na nke abụọ, maka nkesa na UK niile. Ha bụ ọkachamara na ịnye ndị ọrụ ụlọ nwere nkwarụ gụnyere ndị nwere nkwarụ mmụta, yana ụlọ ọrụ na ọrụ ebere ndị na-enyere ndị nwere nkwarụ aka.
Ihe ngosi Barnet
Nke a bụ otu nzukọ mepụtara n'ihi njikọta n'etiti Barnet Play Association (BPA) na IPOP. Ha nwere ọba akwụkwọ nke ihe eji egwu egwu na ihe eji egwuri egwu maka ego niile maka ego niile! Nke a gụnyere Tubes Afọ, Fiber Optics, Star Mats, Igbe UV, Ngwongwo Egwuregwu Soft, Bag Bean na Cushions, Sensory Backpacks na ọtụtụ ndị ọzọ! Kpoo Andrew na Fair Play Barnet na 020 8203 1257 ma ọ bụ site na email gaa ihe egwuregwu@fairplaybarnet.org.uk iji hazie ego gị ugbu a!
Teknụzụ gụnyere ya na-enye ezigbo sọftụwia mmụta mmụta pụrụiche kachasị mma, ngbanwe na ngwaọrụ nnweta kọmputa, ihe enyemaka nkwukọrịta dị mfe na teknụzụ enyere ndị na-amụ akwụkwọ nwere nkwarụ anụ ahụ, enweghị ntụpọ ma ọ bụ nsogbu mmụta. Nakwa ihe ha nwere, ha na-ebutakwa ngwaahịa si AbleNet, AMDi, Crick, IntelliTools, Keytools, Maxess, Mayer Johnson, SoftTouch, Traxsys, Widgit na ndị ọzọ.
Naanị Tomụaka n'èzí
Guzosie ike na 2003, ha bụ azụmaahịa ezinụlọ na-ahụ maka egwuregwu akụrụngwa n'èzí ọtụtụ n'ime ha dabara maka ụmụaka nwere mkpa pụrụ iche dịka ogwe ọrụ, swings, slides na sandpits.
Gbanyụọ bụ ọrụ ebere mba nke na-achọ inyere ndị nne na nna na ndị nlekọta nke ụmụaka nwere nkwarụ aka, ma ọ bụ ndị nwere mkpa ọ bụla n'ụdị ọ bụla, site na ịchọpụta, ịtọ ụtọ na ịnye ngwaahịa bara uru, ngwaahịa bara uru iji dozie nsogbu kwa ụbọchị. Anyị nwere akwụkwọ katalọgụ ha n'ụlọ akwụkwọ, biko jụọ ma ị ga-achọ otu.
Associationtù Na-ahụ Maka Tomụaka na Ntụrụndụ National
Ndị otu a nwere ihe karịrị afọ iri atọ na ise n'inyere ọba akwụkwọ na ụlọ ezumike aka yana ịrụ ọrụ n'ofe ọrụ afọ ofufo na nke iwu na-emepe iwu yana iji ahụmịhe anyị iji kwalite uru nke igwu egwu na oge ezumike maka mmadụ niile.
Uchechi bụ onye na-ebu uwe maka ndị okenye na ụmụaka nwere nkwarụ. Ha na-agbasi mbọ ike itinye ụkpụrụ na ihe na-egbukepụ egbukepụ na ụwa isi awọ nke uwe na-agbanwe agbanwe. I nwekwara ike ịkpọ ha na 01538 381430.
Remap bụ ọrụ ebere na-arụ ọrụ site na netwọk zuru ụwa ọnụ nke ndị ọrụ afọ ofufo raara onwe ha nye. Ndị a na-eji amamihe ha na nka ha enyere ndị nwere nkwarụ aka inweta nnwere onwe n'akụkụ ụfọdụ nke ndụ ha, ma ọ bụ iji nwee ohere ịtụgharịrị n'oge emechibidoro ha. Ha na-emegharị, mee ka ọ dị mfe, hazie ma mepụta otu ihe. Ndi okacha amara bu ndi eji aka ha edozi Remap ma nye ha ndi choro ha. Ogwe Barnet: Tony Tricker na 8366 0491 ma ọ bụ Esther Challis na 8440 6211
ROMPA na-arụpụta ma na-etinye akwa dị mma, nke akụrụngwa maka ihe karịrị afọ 25. ROMPA na-enye ọtụtụ ihe mmetụta Sensory Integration maka mmadụ niile, gụnyere nhọrọ maka ụlọ na klaasị.
Mmetuta Direct hazie ma mepụta akwa blanket na ngwaahịa ndị ọzọ dị egwu.
Mmụta Mmetuta na-ere ihe egwuregwu ụmụaka na ihe egwuregwu ụmụaka mkpa pụrụ iche kemgbe mmalite afọ 2009 ma nwee aha ọma maka inye ihe egwuregwu ụmụaka na mkpa ụmụaka ji egwuri egwu na ọnụahịa dị ala karịa ndị na-agba ụmụaka ji egwu egwu. Ha na-enye nnyefe ngwa ngwa yana ezigbo ọrụ ndị ahịa.
Site na ịkụziri ụmụaka ihe eji egwuri egwu maka ụmụ akwụkwọ maka egwuregwu maka ụmụaka maka mkpa pụrụ iche na onyinye maka ụmụaka autistic, SenseToys na-enyere gị aka ịchọta ihe ịchọrọ. Iji ndụmọdụ na echiche maka egwuri egwu ọ bụla, ị nwere ike inyere nwa gị aka inwe obi ụtọ mgbe ọ na-amụ ihe site na igwu egwu.
Mmetụta sensọ mee akwa nkpuchi a na-eji ego achicha buru ibu na akwa akwa. Onye ọ bụla blanket na aka aka mere ịtụ na-abịa na abụọ nha 36 x 48 sentimita asatọ & 40 x 55 sentimita asatọ, agbakọta n'ime, abụọ kpachie nile & e mere na-ele anya dị ka nkịtị blanket.
Lọ nkwakọba ihe Sensory
Companylọ ọrụ ọhụụ na-emeri ụlọ ọrụ ọhụụ, ọkachamara na ihe omume na-akpali akpali ma na-akpali akpali, ihe egwuregwu na akụrụngwa. Nke a bụ isi mmalite nke ihe eji egwuri egwu na ihe dị egwu maka mkpa pụrụ iche. A na-ahazi ihe dịka nke ọ bụla n'ime uche ise.
Emepụtara Mgbapu iji mee ka ndụ dịtụ mfe maka ndị ọrụ anyị nwere nkwarụ na ndị na-elekọta ha. Anyị ghọtara na maka onye ọ bụla nwere nkwarụ, ọ naghị adị mfe mgbe niile ịpụ na; na-eche mgbe niile banyere akụrụngwa ị ga-achọ iji nweta ebe na ihe agagharị na-enyere gị aka mgbe ị nọ ebe ahụ, nwere ike ịkpalite nrụgide. Na ịgbalịsi ike ịghara ichegbu onwe gị banyere nke a. Nwere ike ịgbazite oche nkwagharị, ndị na-agagharị agagharị, akwa profaịlụ na akụrụngwa ndị ọzọ na ogologo oge ma ọ bụ obere oge ka ha wee dịrị gị ka ijiri ebe ị na-aga.
TFH UK (Nemụaka Mkpa Pụrụ Iche)
TFH na-eweputa otutu ihe egwuregwu ndi puru iche, site na igwe Multi-Sensory, na Swings, Trampolines na ihe ndi ozo nke ihe mmetụta uche, ndi ngbanwe, ugwo na umuaka umuaka umuaka. N'ime ihe karịrị 1,000 ịhọrọ - ha na-atọ ụtọ, na-agbanwe agbanwe ma na-adịkarị iche!
Wonsie bụ ọkachamara na ahụ maka ụmụaka toro eto. Ogo nke 'Wonsies' na-amalite ebe ọtụtụ ụdị na-emecha. Ha na - enyere aka ịhapụ aka na - awagharị akwa nhicha, gbochie ekwesighi ekwesighi, debe mkpịsị aka na - achọghị igodo bọtịnụ / PEG tubes, gbochie ụmụaka nwere eczema ịcha ụcha, jigide akwa oyi akwa n'okpuru uwe na ihe ọ bụla ọzọ chọrọ nke mkpuchi ala. A na-ewu ewu nke ọma n'etiti ndị nne na nna nwere ụmụaka nwere mkpa pụrụ iche. Tel: 07565 799 668.